COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဘယ်လိုပြန့်ပွားသလဲ? COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူတစ်‌ယောက် နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတာ ဒါမှမဟုတ် အသက်ရှူထုတ်တဲ့အခါ နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်မှထွက်လာတဲ့ အရည်စက်လေးတွေကတစ်ဆင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားပါတယ်။ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီအရည်စက်တွေဟာ အရာ၀တ္ထုပစ္စည်းတွေ မျက်နှာပြင်တွေ ဥပမာအားဖြင့် စားပွဲခုံ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း အစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတင် ကျန်နေနိုင်ပါတယ်။ တခြားလူတွေက ဒီရောဂါပိုးရှိနေတဲ့အရာတွေကို ကိုင်တွယ်မိပြီး မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တွေကို လက်မဆေးဘဲ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိမယ်ဆိုရင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရောဂါပိုးရှိသူ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးရာမှတစ်ဆင့် ပြန့်လွှင့်လာတဲ့ အရည်အမှုန်အမွှားတွေကို ရှူသွင်းမိခြင်းမှလည်း ‌ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဖျားနာနေသူတစ်ဦးနဲ့ အနည်းဆုံး ၃ ပေအကွာမှာနေသင့်ပါတယ်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ အရာ၀တ္ထုမျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်လဲ? သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေအရ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ အရာ၀တ္ထုမျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ နာရီပိုင်းမှ ရက်ပိုင်းလောက်ကြာတဲ့အထိ ရှင်သန်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေတဲ့ မျက်နှာပြင်အရာ၀ထ္တုအမျိုးအစား၊ ပတ်၀န်းကျင်အပူချိန်နဲ့ လေထုအတွင်းရှိ ရေငွေ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ‌ရောဂါပိုးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဟာ နာရီပိုင်း ရက်ပိုင်းစသဖြင့် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ စားပွဲခုံ၊ ထိုင်ခုံ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာကဲ့သို့ အရာ၀ထ္တုမျက်နှာပြင်တစ်ခုခုကို ရောဂါပိုးရှိသူကိုင်တွယ်ထားနိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် ရောဂါပိုးရှိနေနိုင်တယ်လို့ သံသယရှိပါက ထိုအရာ၀တ္ထုတွေကို (Disinfectant) ပိုးသန့်ဆေးရည်ဖြင့် သန့်စင်သင့်ပါတယ်။ လက်နဲ့ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိကပါ (Hand Sanitizer) အရက်ပြန်ပါတဲ့ လက်သန့်ဆေးရည် သို့မဟုတ် ဆပ်ပြာနှင့်‌ရေကိုအသုံးပြုပြီး လက်ကိုစနစ်တကျသန့်ရှင်းရပါမယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြေနည်းအောင် မျက်လုံး၊ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းတို့ကို လက်ဖြင့်ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ခြင်းမှလည်း ရှောင်ကြဥ်သင့်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ မရှိတဲ့သူ(ကျန်းမာရေးကောင်းနေသူ)ဆီကနေ COVID-19 ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါသလား? ရောဂါလက္ခဏာ လုံး၀မရှိတဲ့သူဆီကနေ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နိုင်ခြေ နည်းပါးပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးရှိသူအများစုက (အထူးသဖြင့် ရောဂါအစပိုင်းအချိန်တွေမှာ) သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာလောက်သာ ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိပြီး ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပြတဲ့သူတွေဆီက သာမန် နှာချေ၊ချောင်းဆိုးရာမှ ထွက်လာတဲ့ အရည်အမှုန်အမွှားတွေကတစ်ဆင့် ‌ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါရှိသူရဲ့ မစင်အညစ်အကြေးတွေကတစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါသလား? မစင်ကတစ်ဆင့် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်နိုင်ခြေနည်းပါတယ်။ လူနာရဲ့‌မစင်အညစ်အကြေးထဲမှာ ရောဂါပိုးတွေ့နိုင်ပေမယ့် ဒီလိုပြန့်ပွားမှုပုံစံဟာ COVID-19 ပြန့်ပွားတဲ့အဓိကလမ်း‌‌ကြောင်းတေ့ာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက် အိမ်သာ၀င်ပြီးတိုင်းနဲ့ အစာမစားခင်မှာ လက်ကိုသန့်စင်အောင် သေချာဆေးသင့်ပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဆီကတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသလား? ဟောင်ကောင်မှာ အိမ်မွေးခွေးတစ်ကောင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းရှိပေမယ့် ယနေ့အထိတော့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကတစ်ဆင့် လူကိုကူးစက်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုး မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ‌ရောဂါပိုးရှိသူ ချောင်းဆိုး၊နှာချေတဲ့အခါ စကားပြောတဲ့အခါ နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကတစ်ဆင့် ပြန့်လွင့်လာတဲ့ အရည်အမှုန်အမွှားတွေကနေပဲ အဓိက ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လက်ကို မကြာခဏဆေးပါ။ ‌လက်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း စနစ်တကျနဲ့ သေချာသန့်စင်အောင် ဆေးရပါမယ်။
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားရာနေရာ‌ဒေသတွေက ပို့လာတဲ့ပစ္စည်း၊ အထုပ်အပိုးတွေမှတစ်ဆင့် ‌ရောဂါကူးစက်နိုင်သလား? COVID-19 လူနာတစ်‌ယောက်က ‌ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကို‌ ရောဂါပိုးပေးနိုင်ခြေ နည်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ‌ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ သယ်ယူပို့ဆောင်‌ရေးလမ်း‌ကြောင်းတစ်လျှောက် ပတ်၀န်းကျင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ အပူချိန်အပြောင်းအလဲတွေကို ဖြတ်သန်းလာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် COVID-19 ‌ရောဂါဖြစ်ပွားရာ‌နေရာက ပို့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း အလွန်နည်းပါတယ်။
ဘာသာပြန်ဆိုသူ: Akayi Thein Design : Htet Aung Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses